Xarumaha arrimaha dhibaatooyinka | Suomen Mielenterveysseura
+ Xarumaha arrimaha dhibaatooyinka
SOS-xarunta arrimaha dhibaatooyinka Helsinki waxay fidisaa adeeg ka caawinta dhibaatada iyo baxanaaninta hore oo degdeg ah. Ujeedada waa caawinaad aasaasi ah oo habeysan oo ka saacidaysa ka gudbidda dhibta.
Dulucda shaqada dhib ka cawinta waxay ka kooban tahay talosiin iyo hagid, ka warbixinta dhibaatada, gargaarka dhimirka arrimaha bulshada, wadashaqeyn kooxeed iyo ka hortagga islilka.
Asaaska dhibaato ka caawinta waxay tahay caawinta dadka dhibaateysan ama xaalad adag ku jira. Waa lala soo xiriiri karaa iyadoo la is sheegeyn ama takhtar ku soo dirin.
SOS-xarunta arrimaha dhibaatooyinka waxay ku taallaa Helsinki Galbeedka-Pasila. Xaruntu waxay fidisaa adeega ka caawinta dhibaatooyinka laga soo bilaabo sanadkii 1970.
Xarumuha dhibaatooyinka waxay fidiyaan caawinaad dhammaan Finland oo dhan
Ururka Caafimaadka dhimirka Finland (Suomen Mielenterveysseura) ee xarumaha dhibaatooyinka gobolada Finland oo idil guudahaan waa 19 xarumood. Kuligoodna waxay sameeyaan shabagdda xarumaha dhibaatootooyinka. Toban gobol oo leh xarunta dhibaatooyinka iyo SOS-xarunta arrimaha dhibaatooyinka ee Helsinki oo ah xarunta guud ee shabagadda xarumaha dhibaatooyinka oo loo yaqaan Tukinet.
Xarumaha arrimaha dhibaatooyinku waxay u fidiyaan dhammaan gobolada kaladuwan ee Finland dadka ku nool caawinaad dhanka dhibaatooyinka iyo mashaakilaadka ah. Dhammaan xarumahaas dhibaatooyinku waxay u shaqeeyaan si isku mid ah. Booqashooyinku waa kuwo bilaash ah.
Macaamiisha xarunta arrimaha dhibaatooyinka wuxuu noqon karaa qofwalba, laba isla nool, qoys ama koox. Macaamiishu way booqan soo booqan karaan iygoo magacooda sheegin. Arrimahooduna waa u khaas bilawga hore ee wadashaqeyntaba. Kulamadu waa kuwo lagu kalsoonaan karo oo khaasahaan loo qadarinayo. Kemi, Kuopio, Salo iyo Vammala xarumahooda arrimaha dhibaatooyinka waa suutogal iney u fidiyaan hooyga dhibqabayaasha. Baahida caawinaadda mudaada dheer awgeed waa la ma huraan shaqsi caawiyaha ama wadakulamo kooxeed.
Xarunta arrimaha dhibaatooyinka waxaa ka shaqeeya shaqaale u tababaran arrimaha dhibaatooyinka iyo shaqaale shaqsi caawiyeyaal iska-waxuqabso ah. Xarunta arrimaha arrimaha dhibaatooyinka waxaa maalgaliya inta ugu badan uruka khamaarka ee Raha-automaattiyhdistys RAY.
Joensuu, kriisikeskus, Kotikartanoyhdistys ry
Rauma, kriisikeskus Ankkurpaikk
Rovaniemi, Lapin kriisikeskus
Seinäjoki, kriisikeskus Mobile
Vihti, kriisikeskus p. (09) 2242 2500